प्रेस १ यदि तपाईसँग बजेट छ | Martech Zone
प्रेस १ यदि तपाईंसँग बजेट छ भने
बिहीबार, अक्टुबर 22, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
केही वर्ष पहिले, मलाई याद छ जब एक ब्लगरले लिएको थियो Scoble खुल्ला ब्लगरले Scoble लाई उसको घटनाको लागि आमन्त्रित गर्‍यो र त्यसपछि Scoble अनुरोध गरिएको यात्रा र खर्चहरू भुक्तान गर्दा बाल्क गरियो। Scoble ले अनलाइन जवाफ पनि दियो र यसको राम्रो काम गर्‍यो।
यो हप्ता एक कठिन (तर धेरै रमाईलो) हप्ता भयो। मसँग मेरो पुस्तकको लागि अध्यायहरू छन्, म २ प्रोजेक्टहरू पूर्ण गर्दैछु, र म अझै पनि सम्भावित ग्राहकहरूसँग काम गर्दैछु। म हरेक हप्ता धेरै व्यक्तिलाई फोन, ईमेल, ट्वीटर, फेसबुक, प्लाक्सो… आदि मार्फत छुन्छु। म यस हप्ता दुई पटक हप्काएँ भनेर पाठकहरू जसले मैले जवाफ दिएका छैनन र एउटा सम्भावनालाई पनि मैले कम महत्त्वलाई कम महत्त्व दिएन। ।
सम्भावना मेरो गल्ती थियो - मैले कम्पनीलाई कडाईका साथ ट्र्याक गर्नु पर्ने थियो। यद्यपि पाठकहरू अर्को कथा हुन्। मैले फोन पाएँ जहाँ महिलाले भने,
तपाईसँग के छ इन्टरनेट मान्छे - तपाईले फोनलाई जवाफ दिनुहुन्न, ईमेललाई जवाफ दिनुहुन्न… जवाफ दिनुहुन्न!
मैले माफी मागेन बरु, मैले उनलाई सत्य बताएँ। मसँग मेरो ब्लगमा कम्तिमा २०,००० नयाँ आगन्तुकहरू छन्, सायद २ 20,000० प्रतिक्रियाहरू (अधिक स्प्याम हो), र साथै १०० भन्दा बढी अनुरोधहरू। अनुरोधहरू सेवाहरूको लागि अनुरोधहरू होइनन्। तिनीहरू केवल पाठकहरू हुन् थप सल्लाह वा जानकारी खोज्दै। म ब्लग पोष्ट को माध्यम बाट ह्यान्डल गर्न कोशिस गर्दछु। म सँधै जवाफ दिदिन। वास्तवमा, म प्राय: प्रतिक्रिया दिँदिन।
यहाँ एक ईमेल छ जुन मैले भर्खरै शीर्षकमा प्राप्त गरेको थिएँ मैले मेरो नेटवर्क लेखे पछि र शीर्ष Indian० इन्डियाना ब्लग पोलमा उनीहरूको समर्थनको लागि सोधें:
मैले तपाईंको ब्ल्गमा बहु सन्देशहरू लेखेको छु र ट्विटरमा तपाईलाई बिभिन्न डीएमहरूको असंख्य सन्देशहरू पठाएको छु जुन तपाईको राय, विचार र सुझावहरू विभिन्न डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूको बारेमा सोधेको छ र मैले तपाईबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छैन। बुझ्दै जाँदा, मलाई थाहा छ कि तपाईं एक धेरै व्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईंको नयाँ कम्पनी र सबै कुरा सुरू गर्नका साथ, त्यसैले गर्दा मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको प्रतिक्रियाको अभाव कहिल्यै लिएन (तथ्यको बाबजुद पनि) क्रिस बोगन, बेथ हार्ट, एरिक डेकर्स आदि सधैं मेरो लागि प्रश्नको उत्तर दिए)।
क्रिस, बेथ र एरिकले यसैसँग राख्न जारी राख्नु भएको कुरा कत्ति राम्रो छ! म AM बिहान सम्ममा थिएँ र ईमेललाई पूर्वावलोकन र प्रतिक्रिया मात्र पूरा गर्‍यो। म क्रिस, बेथ र एरिकको सल्लाहको प्रतिक्षा गर्छु कि म कसरी पाउन सक्छु भन्ने अनुरोधहरूको संख्यालाई सँधै राख्न सक्छु।
हिजो, म एक क्षेत्रीय सम्मेलन मा थिए र people जनाले flanked थियो ... एक एक सहयोगी थियो, एक मेरो बिक्री कोच, र एक ग्राहक थियो। सहयोगी र बिक्री कोच मेरो बारे मा मजाक कहिल्यै फोन वा ईमेल तिनीहरूले मलाई पठाएको जवाफ। मैले आफ्नो ग्राहकलाई हेरे र भने, "के म तपाईको फोन कल र ईमेलहरूको उत्तर दिन्छु?"। "हो," उनले भने, "... सँधै ... कहिलेकाँही मध्यरातमा! मेरो विचारमा तपाईले २ 24 घण्टा काम गर्नुहुन्छ। "
कहिलेकाँही म वेबमा विश्वास गर्दछु र मान्छेहरू मन पराउँछन् क्रिस एन्डरसनले मलाई र मेरो व्यवसायलाई ठूलो त्याग गरे। मेरो घरमालिक, मेरो लेनदारहरू, मेरो उपयोगिता कम्पनीहरू, र विक्रेताहरू स्वतन्त्र छैनन्। नतिजाको रूपमा, म कार्य गर्न सक्दिन मुक्त। मैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ:
ग्राहक - यी व्यक्ति हुन् जसले मेरो उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि भुक्तान गर्छन्।
संभावनाहरु - यी कम्पनीहरू हुन् जुन बजेटको साथ ग्राहक हुन तयार छन्।
मुख सम्भावनाहरूको शब्द - यी कम्पनीहरू हुन् जुन मलाई मेरो नेटवर्क र मेरो ग्राहकहरू हुन् जो जान्दछन् कि कम्पनीको बजेट छ र ग्राहक बन्न तयार छन्।
अन्य अनुरोधहरू - यी सबै अरू हुन् ... ईमेलहरू, फारम अनुरोधहरू, फोन कलहरू, इत्यादि। यी सामान्यतया मेरो सूचीबाट खस्छ किनकि म १, २ र on मा काम गर्दैछु।
के म यस दृष्टिकोणको कारण अवसरहरू हराइरहेको छु? हुनसक्छ - त्यसैले गर्दा म पाउँदैछु यहाँ इंडियानापोलिस मा बिक्री कोचिंग। मलाई कुनै विचार छैन। मलाई थाहा छ "अन्य अनुरोधहरू" ले मलाई समीक्षा र जवाफ दिनको लागि महिनौं लिन सक्दछ ... र मैले त्यसो गर्न महिनौं खर्च गर्न सक्दिन।
पाठक ग्राहक छैनन्। सदस्यहरू पनि ग्राहक छैनन्। त्यो कठोर लाग्न सक्छ, तर पाठकहरू र ग्राहकहरूले आफ्नो सदस्यता र यस ब्लगबाट जानकारीको लागि भुक्तान गरिरहेका छैनन्। मसँग पाठकहरू वा ग्राहकहरूसँग कुनै सेवा स्तर सम्झौता छैन।
यो ब्लग एक लाभदायक उद्यम हैन र म एक इन्टरनेट करोड़पति छैन ... यसको टाढाबाट। म कडा परिश्रम गर्दै छु, यद्यपि यो लाभदायक हुनको लागि। चाँडै नै ब्लगले मेरा सबै बिलहरू तिर्ने बित्तिकै, म आफ्ना पाठकहरूको र ग्राहकहरूको अनुरोधहरूको जवाफ दिनभरि बस्न पाउँदा खुशी हुनेछु। त्यतिन्जेल ... मैले सेवामा जानु पर्छ मेरो ग्राहकहरु.
यदि तपाई ग्राहक बन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईको अनुरोधलाई अक्षरमा लेख्नुहोस्। मैले हिजो राती कसैलाई मजाक गरेँ कि मैले आफ्नो कामको भ्वाइसमेललाई राज्यमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, "यदि तपाईंसँग बजेट छ भने १ थिच्नुहोस्!"। त्यसोभए ... यदि तपाईं पाठक वा ग्राहक हुनुहुन्छ र केही नि: शुल्क सल्लाह खोज्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया म जवाफ नदिँदा निराश नहुनुहोस्। म बिलहरू तिर्न प्रयास गर्नमा व्यस्त छु!
स्केल: बक्समा डाटा भण्डारण!
उत्कृष्ट पोइन्ट! म हिजो एक सहकर्मीसँग संक्षिप्त हुनुको महत्त्वको बारेमा त्यस्तै छलफल गरिरहेको थिएँ र उनी अहिले पाउँदै थिइनन् र गुनासो गरे कि म उनलाई भ्वाइसमेलहरू चाँडै फर्काउँदिन। मैले उनलाई सोधें कि म उनलाई कती चाँडो तिनिहरूको ईमेलहरूमा प्रतिक्रिया गर्दछु र उनले चाँडै भर्ती गरिन्। हामी सबैले हाम्रो सम्बन्धहरू र सञ्चारको विधिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ र दुईको मिश्रण। अब, यदि मैले यस टिप्पणीको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्राप्त गरेन भने, म… पूर्ण रूपमा बुझ्दछु।
धन्यवाद! सकेसम्म म ब्लग र यी अनुरोधहरूको लागि एक प्रशासक वहन गर्न सक्दछ, म हुनेछ! On यसमा समर्थनको कदर गर्नुहोस्, म ब्याकुलको बारेमा चिन्तित थिएँ।
म जस्तो राम्रो टिप्पणीलाई जवाफ दिन कसरी सफल हुन सक्छु, निक? तपाईं सहि हुनुहुन्छ - यो माध्यम हो जुन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ कहिलेकाँही हामीलाई प्रयोग गर्न बल गरिन्छ। म दिनभर बैठक र फोनमा बिताउन मन पराउँछु, तर त्यसले बिलहरू भुक्तान गर्दैन। दिनभरि मेरो धेरै समय बचत गर्न ईमेल धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
मलाई लाग्छ कि म यो ब्लग 'freebie' भएको देख्दछु ... हाम्रो प्रत्येक ब्लगरको बिक्री फनेलमा प्रवेश पोइन्ट। यदि साइटमा जानकारी सम्पूर्ण चित्र रंग्दैन भने - म मेरो पाठकहरु को साथ काम गर्न को लागी यसलाई अर्को स्तर मा प्राप्त गर्न मनपर्दछ!
तपाईंको एक ग्राहकको रूपमा, डग, म यो प्रमाणित गर्न सक्दछु कि तपाईले समयमै ग्राहकहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ। यो राम्रो छ कि धेरै व्यक्तिहरूले तपाईंको रायलाई मूल्यवान गर्दछन् (साथै उनीहरूले पनि), तर मलाई लाग्छ कि तपाईं आफ्नो बहुमूल्य ब्लग पोष्टहरूको साथ "फिर्ता" दिनुहुन्छ। जब मेरो कम्पनीले तपाइँका सेवाहरूको लागि भुक्तान गर्दैछ, म तुरुन्त ध्यानको आशा गर्दछु। तपाईं कहिले पनि डेलिभर गर्न असफल हुनुहुनेछ र त्यो हो यसैले म तपाईंलाई सिफारिश गर्न जारी राख्छ। ग्राहकको दृष्टिकोणबाट, तपाईंको प्राथमिकताहरू स्पट-अन छन्।
जस्तो लाग्छ कि तपाईंले मलाई आफ्नो व्यक्तिगत सहायकको रूपमा भाँडामा लिनु पर्छ। जहाँसम्म म मानिसहरूलाई जवाफ दिइरहेको छु कि सम्भावित भन्दा बढी कहिले पनि तपाईंलाई राजस्वमा ल्याउँदैन मँ मेरा सेवाहरूका लागि स्पष्ट रूपमा भुक्तान गर्न आवश्यक छ - नयाँ मिडिया / मार्केटिंग / विज्ञापनको आगाडि नि: शुल्क सल्लाह र सेवाहरूको आगमन हुन्छ। म यो भन्नेछु। यदि तपाईंले टिप्पणी वा ईमेलमा आधारित कुनै अन्तर्दृष्टि वा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने मलाई आशा छ कि तपाईं त्यस व्यक्तिलाई जवाफ दिनुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईंले विगतमा मेरो केही ब्लग टिप्पणीहरूमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो त्यसैले मलाई थाहा छ तपाईं सुन्नुहुन्छ र सम्भव भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। चारैतिर ठूलो अंक।
डग मैले तपाईको ग्रिपलाई बुझ्नको लागि यस माध्यममा पर्याप्त फ्रिबिजहरु गरेको देखेको छु त्यसैले यहाँ कुनै प्रतिकृया छैन। मलाई थाहा छैन कि कसैले भुक्तान गर्दा बिल कसरी तिर्न सक्छ। यी उही मानिस हुन् जो U2 मा पागल छन् उनीहरूको गीतहरू अधिकार कम्पनीहरूमा बेच्दै बेचिन्छ।
धन्यवाद Bo! तपाईं एक राम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ। म यो तथ्यलाई माया गर्दछु कि तपाईले जहिले पनि प्रतिक्रिया दिन समय लिनुहुन्छ जब म यो जस्तो गर्व गर्दछु।
त्यसोभए म यस ब्लगका पाठकहरु लाई केहि गरीरहेछु जसले पछिल्ला years बर्षमा निःशुल्क सामग्री प्रदान गरिरहेको छु? साँच्चै?
मेरो ब्ल्याग निश्चित रूपमा एक प्रमुख जेनरेटर हो तर month०,००० आगन्तुकहरू एक महिनाको साथ, तपाईं कसरी प्रस्ताव गर्नुहुन्छ कि मैले प्रत्येकमा कुराकानी गर्ने प्रबन्ध गर्ने छु? के मैले पोइन्ट प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्छ? पद्धति के हो? जादुई बुलेट के हो?
यो कसरी गर्ने सुन्नको लागि अगाडि हेर्दै।
यदि मात्र डगको समय स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध भए!
एउटा चीज तपाई हराउनुभएको छ, के तपाई चिढाउनु नै धेरै रमाईलो हुनुहुन्छ .. तपाईका साथीहरूले तपाईंलाई गाह्रो समय दिएमा तपाई सँधै फिकर हुनुहुनेछ ..
गम्भीरतापूर्वक, पोष्ट मनपर्दछ। जब तपाईं व्यापारमा हुनुहुन्छ जुन प्राय: अमूर्त हुन्छ, मानिसहरूलाई लाग्छ कि यो नि: शुल्क मद्दतको लागि सोध्नु ठीक छ, र तपाईं साझेदारीमा सामान्यतया उदार हुनुहुन्छ। चाल सिकिरहेको छ जब भन्न को लागी, म उत्तर दिन खुसी हुनेछु लामो बैठकमा। यसको लागि मेरो शुल्क हो ...
अब तपाईं जानुभयो र डग गर्नुभयो! तपाईंले अर्को उत्कृष्ट पोष्ट लेख्नुभयो। तपाईले सम्पन्न गरेको सबै चीज सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमताको लागि म इमानदारीसाथ तपाईंको प्रशंसा गर्छु। मलाई थाहा छ मँ तपाईंको समयको ती गैर-राजस्व अनुरोधकर्ताहरू मध्ये एक हुँ र समात्नको लागि गाह्रो भइरहेको बारेमा तपाईंसँग मजाक गरेको छु। तर म यो पनि सोच्छु (आशा राख्छु) म सन्तुलन गर्छु कि तपाईको समयलाई मूल्यवान छ र यस बारे मा तपाईलाई बढाइ दिईएको छैन वा आपत्ति नराख्नु भएको छैन यदि तपाई म संग फिर्ता हुनुभएन भने। धेरै चोटि मैले आफैंले प्रतिक्रिया नदेखेको पाएँ र अरुले मलाई अलि गहिरो खन्न र मेरो टाउको भित्तामा लगाउन बाध्य पारिदिए जब सम्म म आफैंलाई केही नबुझेको हो र त्यो ठूलो भावना हो।
तपाईं र म सँग समान समय तालिका र माग राख्नु भएको छ। म सोध्ने सबैको लागि सकेसम्म सहयोगी हुन कोशिस गर्छु, तर म यो अनुभूतिमा आउँदैछु कि मेरो औंलाको छेउमा हुन सक्ने एक उत्तम समय व्यवस्थापन उपकरण मध्ये दुई अक्षरको शब्द "थोरै" को अलि बढी प्रयोग हो। ।
आशा छ कि म सबै चीजमा सन्तुलन फेला पार्न सक्छु र भन्दछु, "म अहिल्यै गर्न सक्दिन, तर तपाईलाई सक्षम बनाउन को लागी मलाई सिफारिस गर्नुहोस्।"
हैन "आशावादी" @ जेसोनियन: डिस्कस - मैले यस क्षेत्रमा निर्माण गरेको साझेदारी मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो एक विस्तारित समर्थन नेटवर्क हो जुन मँ झुकाउँछु र म प्राय: 'यसलाई फिर्ता तिर्ने' आशा गर्दछु! तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ!
र उल्टो सर! उपाध्यक्ष! यो सेन्ट अरबक्समा हाम्रो मासिक सह-कार्य सत्रको लागि समय को बारे मा हो कि जस्तो देखिंदैन तर वार्षिक रूपमा! =)